Goorma waxaa jiray nalalka woqooyi ee Spain: dhammaan siraha | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 20/06/2022 10:00 | Kala bixid
Waxaan ognahay in nalalka waqooyi ay yihiin ifafaale ka dhaca inta badan qeybta sare ee cirifka waqooyi. Meelaha sida Norway, nalalka woqooyi waxay badanaa dhacaan waqtiyo gaar ah sanadka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiray nalal waqooyi ee Spain dagaaladii sokeeye ee dalka oo dhan ka naxay. Sida la filayo, waa dhacdo ama maahan wax caadi ah.
Maqaalkani waxa aanu kuu sheegi doonaa markii ay jireen nalalka woqooyi ee Spain iyo dhammaan faahfaahinta ku saabsan.
1 Sidee buu u samaysmaa aurora borealis?
2 Goorma ayaa Spain ka jirtay aurora borealis?
3 Dagaalkii Sokeeye Iftiinka Waqooyi
4 Markhaatiyaashii markii uu jiray nalal waqooyi ee Spain
5 Nalalka Waqooyiga meelo kale oo Yurub ah
Sidee buu u samaysmaa aurora borealis?
Nalalka Woqooyi waxaa loo arki karaa inay yihiin iftiin dhalaalaya oo laga arki karo dusha sare. Cirka ayaa lagu midabeeyaa midab waxayna umuuqataa wax gabi ahaanba sixir ah. Si kastaba ha noqotee, maahan sixir. Waa xiriir toos ah oo la leh waxqabadka qorraxda, waxa ka kooban Dhulka iyo astaamaha xilligaas ku jira jawiga.
Meelaha adduunka laga arki karo waxay ka sarreeyaan tiirarka dhulka. Nalalka waqooyiga ayaa la sameeyay iyadoo ay ugu wacan tahay duqeynta qaybo ka mid ah subatomic oo ka yimaada qorraxda mid ka mid ah hawlaheeda loo yaqaan duufaanka qorraxda. Qaybaha la sii daayo waxay leeyihiin midabyo kala duwan oo u dhexeeya violet ilaa casaan. Markay dhex maraan meel bannaanka sare, waxay ku yaacaan dhulka birlabeedka dhulka oo ay leexdaan. Tani waa sababta kaliya ee lagu arki karo tirarka dhulka.
Electrons-ka ay ka soo jeedaan Shucaaca qoraxda oo isku dhafan ayaa soo saara qiiqa muuqaal ah marka uu la kulmo magnetosphere. In magnetosphere waxaa jira joogitaanka weyn ee molecules gaseous iyo mahad lakabkan jawiga in nolosha la ilaalin karo. Dabaysha qorraxdu waxay keentaa xamaasad atomyada samaysa iftiinka aan ku aragno cirka. Iftiinku wuu fidaa ilaa uu ka daboolo hawada oo dhan.
Si fiican looma garanayo goorta ay dhici karto Nalalka Waqooyi, maadaama aan si buuxda loo fahmin dabaylaha qoraxda. Waxaa lagu qiyaasaa inay dhacaan 11-kii sanoba mar, laakiin waa muddo qiyaas ah. Si sax ah looma oga goorta uu dhici doono aurora borealis si loo arki karo. Tani waa caqabad weyn marka ay timaado in la arko iyaga, mar haddii u safrid tiirarka waa qaali iyo haddii aadan arki karin aurora dusheeda, xataa ka sii daran.
Janaayo 25, 1938, hadda 75 sano ka hor, aurora borealis ayaa dhacay kaas oo laga arki karo Yurub oo dhan. Isbaanishka oo uu dagaal sokeeye ka socday ayaa waxaa soo maray dhacdooyin u dhexeeya yaab, jahawareer iyo cabsi.
Dabayl joogto ah oo qaybo ka mid ah Qorraxdu ka afuufo waxay xaaqaysaa wareegga dhulka oo ku fidaa meelaha fog ee nidaamka qorraxda. Inta ay dhacdadani socoto, qaraxyo rabshado wata iyo soo saarid tiro badan oo wadnaha ah ayaa ku dhaca qorraxda, taas oo si weyn u kordhinaysa cadadka walxaha ay sido dabayshan qoraxda ah. Kuwani waa qaybo la dallacay (electrons iyo protons) kuwaas oo marka ay gaadhaan meereheena, ka galaan jawiga iyaga oo sii maraya tirarka iyaga oo raacaya xariiqyada magnetic field ee dhulka.
Marka ay dhex maraan jawigeena, qaybo ka mid ah qorraxda waxay isku dhacaan atamka iyo molecules ku jira jawiga, iyaga oo u qaadaya qayb ka mid ah tamartooda waxa fiisigiska loo yaqaan "state electronics excited." Mar haddii nidaamyada oo dhami ay u janjeeraan heerka tamarta ugu hooseeya, atamka iyo molecules jawiga ku jira waxay sii daayaan tamar xad dhaaf ah iyagoo iftiiminaya iftiin midab leh. Ogsajiin waxa ay soo daysaa cagaar, huruud iyo casaan, halka nitrogen ay soo saarto iftiin buluug ah.
Iftiinkaani wuxuu ka kooban yahay mid ka mid ah cajaa'ibyada dabiiciga ah ee ugu quruxda badan ee cirka habeenkii: Nalalka Waqooyi. Sababtoo ah habka ay u sameeyaan, auroras waxay ka dhacaan gobollada u dhow tirarka dhulka, waxayna caadi ahaan yihiin. ku samee siddooyin aan caadi ahayn oo u dhexeeya 65 iyo 75 loolka darajo, oo loo yaqaan "gobolada aurora"" Greenland, Lapland, Alaska, Antarctica waa qaar ka mid ah meelaha aurorasku ku badan yihiin. Waqooyiga hemisphere, auroras waxaa loogu yeeraa "waqooyi" iyo "koonfur" ee koonfurta.
Dagaalkii Sokeeye Iftiinka Waqooyi
Giraanta auroral waxay ku fidin karaan latitudes u dhow dhulbaraha marka qorraxdu ay la kulanto muddo dhaqdhaqaaq xoog leh oo sababa ka saarista rabshadaha. Auroras ee loolka hoose waa naadir, laakiin waxaa jira kiisas badan oo si wanaagsan loo diiwaangeliyay. Aurora qurux badan ayaa laga arkay Hawaii Sebtembar 1859 iyo Singapore 1909. Dhawaan, Noofambar 20, 2003, nalalka Waqooyi ayaa lagu arkay inta badan Yurub. Sidoo kale gudaha Spain Auroras aad ayey dhif u yihiin oo in yar ayaa la arki karaa qarni kasta.
Janaayo 25, 1938, intii lagu jiray dagaalkii sokeeye, nalalka waqooyi ayaa ka muuqday jasiiradda oo dhan. Iftiinka guduudan, oo ay badanaa sababaan helium iyo ogsijiin ee jawiga hoose, ayaa gaaray ugu badnaan inta u dhaxaysa 20:00 p.m. iyo 03:00 a.m. 26-kii.
Markhaatiyaashii markii uu jiray nalal waqooyi ee Spain
Markhaatiyaal badan baa jira. Paco Bellido wuxuu ku xusay qaar ka mid ah boggiisa «El beso de la Luna» wuxuuna iftiimiyay sharraxaadda José Luis Alcofar buugiisa «La aviation legionario en la Guerra Española». Sida laga soo xigtay Alcofar, muuqaalka nalalkan aan caadiga ahayn ee Barcelona ka dib maalin duqayn xoog leh ayaa si weyn u saameeyay niyadda ciidamada. Maqaalkan, Juan José Amores Liza wuxuu qorayaa dhowr markhaati oo lagu ururiyay Alicante. Wargeyska ABC ayaa soo wariyay 26-kii in Madrid loo maleynayo inuu yahay dab aad u fog. Maadaama qorrax ka soo baxa laga arki karo waqooyi-galbeed ee magaalada, waxaa la rumeysan yahay in buuraha Pardo ay gubanayaan. Laakin isla markiiba waxa la ogaaday in ay ahayd arrin saadaasha hawada ku jirta, taas oo ay ugu wacan tahay joogga iyo fidinta iftiinka weyn.
Aabbaha Luis Rhodes, oo markaa ahaa agaasimaha Ebro Observatory, ayaa qoraal sharraxaad ah ku daabacay Herald 27-kii, isaga oo ku sifeeyay aurora sida " taageere weyn oo iftiin ah oo u furma xagga cirka. milicsi xoog leh oo diirada saaray zenith. ”…
Nalalka Waqooyiga meelo kale oo Yurub ah
Meelo kale oo badan oo Yurub ah, laga bilaabo Paris ilaa Vienna, Scotland ilaa Sicily, muuqaalka aurora wuxuu dhaliyay sheekooyin badan. Meelo badan, dab-damiska ayaa lagu wargeliyay inuu dab yahay. Dhacdadan ayaa sidoo kale lagu arkay Bermuda, halkaas oo la rumeysan yahay inuu yahay markab gubanaya. Dalka Maraykanka, dabaylaha cadceedda ayaa curyaamiyay isgaadhsiinta raadiyaha mowjadaha gaaban.
Wasaaradaha Katooliga qaarkood, waagii 1938 kii waxa lala xidhiidhinayaa wax sii sheegidda Marwadayada Faadumo. Qarsoodiga labaad, carruurtu waxay yiraahdaan waxay ka heleen bikraddii July 13, 1917, waxaana loo akhriyi karaa sidan soo socota: «Markaad aragto habeen iftiin leh oo aan la garanayn, ogow in ay tahay sababtoo ah calaamaddaada weyn ayaa ku jirta. Magaca Ilaah oo dunida ku ciqaabi doona dembiyadooda dagaallo, abaaro… Dabcan, dadka qaarkiis waxay arkeen calaamadda weyn ee Aurora ee ku dhawaaqday Dagaalkii Labaad ee Adduunka, sidaas darteed duufaantan qorraxda ayaa mararka qaarkood loogu yeeraa "Duufaantii Fatima".
Marka laga reebo tafsiirrada iyo tafsiirrada diineed ee khuraafaadka ah, waagii 1938 kii wuxuu ahaa guul gaar ah dagaalkii sokeeye ee Isbaanishka. Dhacdo dagdag ah oo qofka Jannada ku eegi karta, qaar la yaabay, qaarna argagixsan yihiin, qaar badanina waxay rumaysan yihiin in xataa Jannada ay ka cadhoonayso bahalnimada dagaalka.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto markii uu jiray nalka woqooyi ee Spain.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Goorma ayaa Spain ka jirtay aurora borealis?